Aliana Gobozov - उज्ज्वल र स्वागतम महिला, टिभी शो "डोम-2" मा एक सम्बन्ध निर्माण गर्न व्यवस्थित गर्ने। त्यो जन्म र शिक्षित थियो जहाँ जान्न चाहनुहुन्छ? कसरी वास्तविकता शो छोडेर पछि उनको जीवन छ? अब हामी सबै भन्नेछु।
केटी बेलग्रेड डिसेम्बर 31, 1993 जन्म भएको थियो। Alina Asatryan - त्यसैले साँच्चै हाम्रो हेरोइन कल। एक Aliana Ustinenko - त्यो "घर-2" मा देखा कोसँग बस उपनाम। परिवार कस्तो मा त्यो बडा भयो? उनको बुबा - आर्मेनिया ARTUR Astaryan एक देशी। समयमा, एक मानिस बनाउने काम गर्न बेलग्रेड आए। Svetlana Ustinenko - यो शहर मा, त्यो एक मिठाई र शान्त केटी संग भेटे। चाँडै जोडी विवाह प्ले। तिनीहरूले एक छोरी, Alina थियो। र परिवार मा5वर्ष पछि Asratyan अर्को replenishment भयो। छोरा Gegham जन्म।
Alina 16 वर्षको हुँदा उनको आमाबाबुले छोडपत्र। बुबा जवान महिला फेला र2बालिका जन्म थिए जसमा उनको परिवार गरे। Svetlana नयाँ विवाह खोजी गरेनन्। त्यो उनको छोरा र छोरी को लागि बस्थे।
एक प्रारम्भिक उमेर देखि केटी रचनात्मकता देखाए। Alina, आकर्षित गाउन र नृत्य गर्न प्रेम गर्नुभयो। र त्यो उनको आमाको पोशाक र सुट घर फैशन शो मा लुगा। छेउमा देखि उनको हेर्नुहोस् रमाइलो थियो।
हाम्रो हेरोइन स्कूलमा म राम्ररी अध्ययन। यस्तो शारीरिक शिक्षा, संगीत र साहित्य रूपमा विषयहरुमा, त्यो सधैं एक शीर्ष पाँच गरिएको छ। नृत्य, हस्तशिल्प र अरूलाई - धेरै पटक एक हप्ताको केटी विभिन्न क्लब उपस्थित। त्यो पनि संगीत विद्यालय गए। त्यहाँ उनले पियानो बजाउन सिके।
उच्च स्कूलमा, Alina स्टूडियो स्वर र हिप-हप खण्डमा भर्ना। यो सुन्दर गाउन र ताल मा सार्न बाहिर गरियो। artistry बालिका को स्तर बस खत्म रोल।
मा 16 वर्ष पुरानो Alina Asatryan आफ्नो साथीहरूको पृष्ठभूमि विरुद्ध बाहिर खडा। । हामी उच्च वृद्धि महिलाहरु बारेमा कुरा गर्दै छन् - 178 सेमी, तर उहाँले थियो, र उज्ज्वल उपस्थिति र स्लिम आंकडा उनको एक मोडेलिंग क्यारियर निर्माण गर्न अनुमति दिनुभयो। सुरुमा हाम्रो हेरोइन फैशन शो र फोटो मार आफ्नो पैतृक बेलग्रेड मा भयो कि भाग छ। तर चाँडै Alina विदेश यात्रा गर्न थाले। त्यो यस्तो इटाली, स्पेन, फ्रान्स र अरूलाई रूपमा देशहरूमा यात्रा।
"डोम-2": Aliana Ustinenko
"पुन: बुट" परियोजना मा जनवरी 2013 मा भएको थियो। को "घर-2" मा जसलाई बीच Aliana Ustinenko थियो,6नयाँ सदस्य आए। त्यो सहानुभूति ओलेग मियामी व्यक्त गरे। तर गोरा उनको सम्बन्ध निर्माण गर्न इन्कार गरे। आर्मेनियाली सौन्दर्य परित्याग गर्न लाग्नुभएको थियो। त्यो Leshey Samsonovym, यूजीन र Sergey Kuzin Sichkar एउटा सम्बन्ध बनाउन खोजे।
Aleksandrom Gobozovym संग सम्बन्ध
Aliane सुन्दर र बलियो जोडी निर्माण गर्न सकेको छैन। सबै परियोजना आए अलेक्जेन्डर Gobozov, जुन 2013 मा परिवर्तन गरियो। उहाँले तुरुन्तै कालो-आँखाहरू श्यामला लागि सहानुभूति व्यक्त गरे। Sasha Alia को हृदय जित्न केही दिन छ। जोडीलाई छुट्टै अपार्टमेन्ट मा बसे।
अक्टोबर 2013 मा, त्यो उनको परिवार तरिका बारे उनको प्रेमी बताए। यो समाचार बारे खुसी मानिस। केही दिन पछि, उहाँले एक प्रस्ताव Aliane गरे। Ustinenko सहमत भए। नोभेम्बर 2013 मा, "घर-2" सबै सहभागीहरू विवाहको मा हिंडे। दुलही र दुलहा को आँखा आनन्द संग रोशनी।
मई 2014 मा, साशा र Aliana Gobozov आमाबाबुले भयो। उहाँले आफ्नो आकर्षक छोरा को जन्म भएको थियो। केटा को बुबाको पक्षमा आफ्नो हजुरबुबा को सम्मान मा नाम थियो - रबर्ट।
जोडी मात्र3महिनाको लागि आफ्नो कक्षहरू बाहिर थिए। त्यसपछि तिनीहरूले, टेलिभिजन परियोजना फर्के आफ्नो छोरा संग। ओल्गा र Svetlana - जवान को सहायता गर्न आफ्नो आमा आए। तथापि, जीवित तिनीहरूलाई साशा र Alia को सम्बन्ध नष्ट गरे। Gobozov घरमा दिनको लागि देखा सक्छ, रक्सी आशक्त।
अप्रिल 2015 मा जोडे छोडपत्र। ती दुवै परियोजना मा अझै पनि थिए। र मई 2015 मा साशा को "घर-2" बाट आफ्नो प्रस्थान घोषणा। Aliana Gobozov पनि परियोजना मा रहन छैन। अर्को घोटाले पछि, त्यो उनको बैग खचाखच भरिएको उनको छोरा उनको काखमा लिनुभयो र गेट बाहिर गए।
"यस वर्षको 2014 को मानिस"
यस माटोको मा, कीरा, गायन प्रतियोगिता, र यति मा खाने फाइट: धेरै महिना, टिभी परियोजनाको सहभागीहरू विभिन्न परीक्षण बित्यो। र शीर्ष पुरस्कार लागि सबै - "। यस वर्षको मानिस" घर मास्को र शीर्षक अन्त मा, विजेता Aliana Gobozov पहिचान भएको थियो। यसलाई दर्शकहरूले बहुमत आफ्नो मत दिए।
2014 को गिरावट मा मेरो आमा Alia Gobozov, Svetlana, निर्माण समयमा संकुचन। को मान्छे अर्को स्थित भावना मा एक महिला ल्याउन व्यवस्थित। Ustinenko क्रम यो ध्यान र टर्की मा छुट्टी मा उनको छोरा संग भयो गर्नुभयो। तर रूस आफ्नो फिर्ती मा धेरै बुरा भएको छ। Svetlana एक मास्को क्लिनिक मा एक व्यापक परीक्षा पारित गरेको छ। मस्तिष्क क्यान्सर - त्यो निदान dreaded परिणाम थियो। गत वर्ष र यस धूर्त रोग संग संघर्ष आधा महिला लागि।
परियोजना देखि retiring पछि Aliana Gobozov उनको आमा र जवान छोरा हेरचाह गर्न आफु समर्पित। पूर्व पति बारम्बार आफ्नो पत्नी संग मिलाप गर्न प्रयास गरेको छ। सुरुमा, त्यो cohabitation कुनै पनि भाषण कली मा nipped। तथापि, Aleksandru Gobozovu यसको विश्वसनीयता प्राप्त गर्न व्यवस्थित। मान्छे पिउने रोकियो, उच्च-तिर्ने काम पाइएन। एक समय पछि त्यो विशाल भाडामा घर मा Alianu, ज्वाइ रबर्ट र Svetlana Mikhailovna सारियो। र हाम्रो हेरोइन को प्रतियोगिता "यस वर्षको मानिस", जोडी किराए जित्यो छ कि आवास।
Aliane र साशा साधारण मा एक बच्चा खातिर सम्बन्ध स्थापित गर्न व्यवस्थित। दोस्रो पटक विवाह - लामो छैन अघि भएकालाई एक महत्वपूर्ण कदम निर्णय गरे। यो आफ्नो घनिष्ठ मित्र र आफन्त मात्र थाह थियो। जनवरी 2016 मा साशा र Aliana Gobozov राजधानी गरेको रजिस्ट्री कार्यालय को एक गए। अब तिनीहरूले फेरि कानुनी पति र पत्नी छन्।
जीवनी र व्यक्तिगत जीवन Alia Gobozov हामीलाई द्वारा विस्तृत छलफल गरेका थिए। हामी तिनीहरूलाई र साशा प्रेम र सद्भाव, र उनको आमा इच्छा - एक तीब्र रिकभरी!
यो श्रृंखला "सही विवाह": अभिनेता आधुनिक कार्यालय रोमान्स प्ले
यो श्रृंखला "बेबी": अभिनेताहरु। "बेबी" - पुर्खाहरूले र सन्तान बीचको सम्बन्ध बारे रूसी टिभी श्रृंखला
अल्ला Dovlatov: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
"राजकुमारी संरक्षण कार्यक्रम": अभिनेता र भूमिकाको
"फोर्ड फ्युजन": मालिकको समीक्षा र सवारी विवरण
नाम गोथिक, कल्पना वा एक subculture प्रतिनिधिको
"बेबी" को एक मिश्रण: समीक्षाएँ pediatricians, संरचना (फोटो)
वैक्यूम क्लीनर Dyson DC45: एक समीक्षा, निर्दिष्टीकरण, समीक्षा
हाइड अन्तर्गत जानुहोस्। कसरी Dota2मा रेजर लागि खेल्न?
सबै भन्दा लोकप्रिय भागहरु वा अक्सर रूसी कार मा खण्डन?
"महान् भालु" (नोवोसिबिर्स्क): व्यापार निष्पक्ष मैदान को एक समीक्षा